သြဂုတ်လ 2016 - စာမျက်နှာ2- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2016 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 2)
pixel ပါဝါ IBCTV များအတွက်ဇာတ်ကောင်ကယ်တင်တတ်၏
IBC 2016, 7.A31 ရပ်: Pixel ပါဝါ, ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်၏ဆန်းသစ်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပလေးအောက်နှင့်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်၏အရေးအပါဆုံးကနိုင်ငံတကာအသံလွှင့် event မှာဂရပ်ဖစ်အာဏာနှင့်ယခုနှစ် IBCTV သည်ဆန်းသစ်သောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးလုံးသည် နှစ်။ IBCTV တစ်ဦးတို့ကပြပွဲအတွင်းမှာ site ပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်, ဝန်ဆောင်မှုထုတ်လွှင့်တဲ့ 24 နာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ပါတယ် ...
IBC မှာ IP ကိုဖြန့်ဝေ၏ပွင့်လင်းအသံလွှင့်စနစ်များမိတ်ဆက်အနာဂတ်
အမ်စတာဒမ်, 31st သြဂုတ်လ 2016 - ပွင့်လင်းအသံလွှင့်စနစ်များတစ်ခုအဆင့်မြင့်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာကိုအမြော်အမြင်, IBC မှာ software ကို-defined တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦး suite ကိုစတင်နေပါတယ်။ စံအိုင်တီဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင် "apps များ" အဖြစ် running ထုတ်ကုန်, အလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သောမှ asi နှင့် SDI အဖြစ်အမွေကို formats ကနေနှစ်ဦးစလုံးသည်ဗီဒီယိုပြောင်းလဲနေဖြင့် compressed လုပ်မထားတဲ့ IP ကိုမှပြောင်းလဲမှထုတ်လွှင့်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေး enable ပါလိမ့်မယ် ...
ContentWise 6.0 ၏ပစ်လွှတ်စုစုပေါင်း UX ကို Automation နှင့်အတူ 100% Personal Television အောင်မြင်ရန်လုပ်ငန်းရှင်များဖွင့်မည်
နယူး Layout Manager ကိုအင်္ဂါရပ်အော်ပရေတာကလိုင်းယင့ apps များမှစသောအပြောင်းအလဲမရှိဘဲတစ်ခုလုံးကို UI ကိုစုစုပေါင်းအလိုအလျှောက် personalization အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ နယူးရီးရဲလ်အချိန်ရှာရန် Updates အင်္ဂါရပ်လျှင်မြန်စွာထိုကဲ့သို့သောသတင်းနှင့်အားကစားအဖြစ်အကြောင်းအရာပြောင်းလဲနေတဲ့၏ search နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုတိုးချဲ့, content တွေကိုရရှိနိုင်မှုအတွက်အောင်းနေချိန်ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ နယူးကုန်ပစ္စည်းနေရာထားရှိငွေရှာမော်ကျူးများယခုအချိန်တွင်ကြည့်ရှုဖို့ e-commerce ကတ်တလောက်ထဲကနေထွက်ပစ္စည်းများအကြံပြု ...
PSA နေရာထားရှိညှိနှိုင်းရေးမှူးကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဝါရှင်တန်, အတွေ့အကြုံကယောဘအပေါ်အခြေခံပြီး, DC Duration: အချိန်ပြည့်လစာ 08 / 25 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်အလုပ်ရာထူးရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ: လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အဘို့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကြေညာချက်များ (PSAs) ၏အခမဲ့နေရာချထားရယူစေရန် ပုံနှိပ်မီဒီယာ, တီဗီ, ရေဒီယို, နှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာမူလတန်းတာဝန်များနှင့်တာဝန်: • PSA ထုတ်လုပ်ဘို့မဟာဗျူဟာများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ...
ခရီးသွား PA ဆိုပြီး
ခရီးသွား PA ဆိုပြီးကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Stamford, 12 / 08 / 25 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်မှန် CT Duration: မပေးထားလစာ $ 16 / နာရီယောဘသည်အလုပ်တာဝန်များအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ: - သူတို့ဖြစ်ကြသည်နေစဉ်ရှိုးပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူကိုဧည့်သည်များနှင့်အတူအလုပ် တိပ်များအတွက်မြို့ - အားလုံးပြပွဲနေ့ကလုပျထုံးလုပျနညျးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု, ထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုအသင်းကိုကူညီ - စာအုပ်များ ...
12 / 08 / 25 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Stamford, မှန် CT Duration: FT နာရီ / On-going အခန်းကဏ္ဍလစာ $ 16 / နာရီယောဘသည်အလုပ်တာဝန်များအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ: - ဟာပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူကိုဧည့်သည်များနှင့်အတူအလုပ် ပြပွဲသူတို့ taping အဘို့မြို့၌ရှိကြ၏စဉ် - အပေါငျးတို့သအဆင့်ထုတ်လုပ်မှုအသင်းကူညီအပေါင်းတို့, ပြပွဲနေ့ကလုပျထုံးလုပျနညျးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်, ဆက်ဖြစ်နေ / Mocap အော်ပရေတာလက်ထောက်။ တောင်းဆိုနေတဲ့
ဒစ်ဂျစ်တယ်, ဆက်ဖြစ်နေ / Mocap အော်ပရေတာလက်ထောက်။ လိုအပ်တဲ့ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Austin, TX Duration: စက်တင်ဘာလ 2016 - ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 လစာ TBD ယောဘကိုကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ဆက်ဖြစ်နေ / Mocap အော်ပရေတာလက်ထောက်ရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 25 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး Austin အခြေစိုက်ရိုက်ကူးများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အခန်းက္ပတာဝန်များနေသောခေါင်းစဉ်: မဆိုစွမ်းဆောင်ရည်ဖမ်းယူများအတွက်ဒေတာဘေ့စသို့မှတ်စုဝင်များအတွက်တာဝန်ရှိ ... •
4 /9/ 15 အပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Stamford, မှန် CT Duration: 08 ရက်, စတင်သည် 25 / 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 09 / 15 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကြုံတွေ့ထုတ်လုပ်မှုရှာကြံအလုပ် ABC ရုပ်သံ Reality ပြပွဲအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား Stamford, မှန် CT အတွက်ယာယီအစို့ဒီကဆြုံးအဘို့အလက်ထောက်။ စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြား, သို့မဟုတ်အခြား၌အလုပ်လုပ်ကိုင်အချို့အတှေ့အကွုံရှိသင့် ...
22 / 24 / 25 အပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Louisville က, KY Duration: အောက်တိုဘာ 08, 25, 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 10 / 22 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား အောက်တိုဘာ 22, 24, 25 (Sat, M, T) ကိုထံမှ PA ဆိုပြီး။ ဤသည် Gig Ali Khan နဲ့စျေးပေါတဲ့စားဟင်းလျာများရာသီ2အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါ ...
Marketing ကိုထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဂျက်ဆင်, 08 / 25 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်က MS Duration: အချိန်ပြည့်လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘအလုပ်ယောဘကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ: ဂျက်ဆင်, က MS အတွက် Raycom မီဒီယာရဲ့ကြီးစိုးအား NBC Affiliate အချိန်ပြည့်ရှာကြံနေပါတယ် marketing ကိုထုတ်လုပ်သူ။ သငျသညျကြော်ငြာကိုချစ်သလား? အထူးနှုန်းများ? သငျသညျအစွန်ပုံရိပ်ယောင်များဖြတ်တောက်ထိပ်တန်းထစ်အရေးအသားနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပုံပြင်ကိုပြောပြနိုင်မလား ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဂျက်ဆင်, 29 / 1 / 08 အပေါ် posted WY Duration: စက်တင်ဘာ 25-အောက်တိုဘာ 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 09 / 29 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကွင်းဆင်း PA ဆိုပြီးတစ်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား စက်တင်ဘာ 29-အောက်တိုဘာ 1 (Th- Sat) မှ။ ဤသည် Gig Ali Khan နဲ့စျေးပေါတဲ့စားဟင်းလျာများရာသီ2အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းလို ...
လက်ထောက်ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Burbank,, CA Duration:4လစာချုပ်လစာ $ 13 မှ 08 / 25 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်တစ်နာရီယောဘသည်လူတစ်ဦးနှင့်လုနီးပါးနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်မယ့်လှုံ့ဆော်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား Burbank, California မှာထုတ်လုပ်သူ။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်မြန်ဆန်စွာပွေးညီပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆင်ပြေအလုပ်လုပ်ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါဖူး ...
ပြည်တွင်းမော်တော်ကားအထူးကုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ကိုလံဘီယာ, 08 / 25 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် SC Duration: ပေးမလစာပေးမယောဘကိုကျနော်တို့ကဒေသခံ Automotive ကျွမ်းကျင်သူအတွင်းအရောင်းနှင့်ဖြန့်ဝေစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်ရှာကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ။ တစ်ဦးချင်းစျေးကွက်မဟာဗျူဟာများပေါ်တွင်အော်တိုအရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့်တိုက်ရိုက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနဲ့ multi-platform ကိုဖြေရှင်းချက်အကြံပြုပါလိမ့်မယ် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်င်း, ဖြစ်ရသည်, AZ Duration: 1 နေ့က - 8 / 30 / 08 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် 25 / 16 လစာပေးမယောဘ cable ကိုစာရွက်စာတမ်း-အဖြစ်မှန်ရုပ်သံပြပွဲများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ ဒါကအလုပ်အကိုင်အမောင်းနှင်မှုတစ်ခုတရားမျှတတဲ့ငွေပမာဏပါဝငျလိမ့်မယ်။ သငျသညျင်း, ဖြစ်ရသည်ထဲကအခြေစိုက်သွန်းအဖွဲ့ဝင်တက်ကောက်နေလိမ့်မယ်လို့ ...
24 / 26 / 08 အပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Bozeman, MT Duration: စက်တင်ဘာ 25-16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘကနေဖျော်ဖြေမှု PA ဆိုပြီးတစ်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 09 / 24 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply စက်တင်ဘာ 24-26 (Sat- M က) ။ ဤသည် Gig Ali Khan နဲ့စျေးပေါတဲ့စားဟင်းလျာများရာသီ2အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းလယ်ကွင်းရှိသည်မယ်လို့ ...
9 /6/ 08 အပေါ် posted ဂီတလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: အချိန်ပြည့်, 25 / 16 လစာစတင်သည်ပေးမယောဘကိုဟိုင်းအဲဒီမှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 09 / 06 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply! ကျနော်တို့အားလုံးစီးရီးကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတအဖွဲ့သည်ထောကျပံ့ဖို့ခိုင်မာတဲ့လက်ထောက်နှင့်မျိုးစုံကွန်ရက်များရှာဖွေနေပါသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ဤပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်: အတူ -Highly အသေးစိတ်-oriented -Familiar ...
2 ၏စာမျက်နှာ 66«12345	»	102030...နောက်ဆုံး»